Timaha cirro ee ragga ah - Daryeel timahaaga Ragga leh qaabka leh | Ragga Stylish
Timaha cirridka ee ragga ayaa boodboodiyey marka laga reebo, maxaa yeelay hadda waxaa lagu xambaaray dhammaan guulihii laga gaadhay madax badan iyadoon ku xirnayn da'da. Rag badan Qaabka timaha ayaa durba tilmaamaya in badan oo shakhsiyaddaada ah iyo guul, waana iyada oo aan arki karno midab guuleysta ama dabiici ah, ama lagu dhajiyay gabay.
Waxaa jira dhowr midab oo timo cawl ah, waxaan leenahay dambas, platina ama mugdi ... dhammaantood oo leh hal cod ama in badan oo ka mid ah oo lagu qasan yahay midabada dabiiciga ah ee timaha. Shaki kuma jiro yaa gashaday wuxuu siinayaa muuqaalkaas iyo shakhsiyadda qaab miyir leh oo xarrago leh.
1 Hooska timo cirro leh oo ragga ah
1.1 Midab qalin ah
1.2 Timo cirro
1.3 Midab madow
1.4 Midab cawlan oo khafiifa
2 Sideen ku heli karaa cirro?
3 Midab barar
4 Codsiga dheeh
5 Daryeelka kadib
Hooska timo cirro leh oo ragga ah
Midab qalin ah
Waa hooska ugu dabiiciga ah ee la gashan karo timaha cirro lehWaa hab lagu muujiyo cirro dhab ah oo cirro leh, in kasta oo haddii aad doonaysid inaad si isku mid ah u ekaato qaab dabiici ah, waa inaad u baahatid inaad ku sifeeysid biliij Waxay ku habboon tahay dhammaan noocyada ragga, xitaa kan ugu yar. Waxay siineysaa shakhsiyaddeena culeyska, muuqaalka daran iyo iftiinka timaha waxayna ku dareemeysaa wax badan oo ka wanaagsan maqaarka maqaarka leh midabyo caddaalad ah.
Midabkan waa ikhtiyaarka lagu doorto ikhtiyaar aad u badan oo asal ah oo qarsoodi ah qaabkaaga. Midabkani wuxuu caan ku noqday xiddigaha Hollywood, gaar ahaan kuwa heesta, sanadihii 2016 iyo 1017, lamana ilaawin.
Waa cod ku habboon dhammaan noocyada midabka wajiga wuxuuna muujiyaa indho badan oo buluug ah. Khubaro badan ayaa yaabab kula shaqeeya midabkan tan iyo markii ay isku daraan dambas, midab cad iyo midab khafiif ah timaha, sameynta muuqaal aad u qabow.
Waa codad in Waxay siin doontaa muuqaal xitaa caqli badan, laakiin iyada oo aan laga bixin timaha cirro leh. Midabkani waxaa lagu dabaqi karaa timaha xitaa xoogaa mugdi ah, si ayan ugu xanuunsan midabkooda oo gebi ahaanba dhammaystiran. Waa in la ogaadaa in qaabkani midabkiisu u muuqdo mid weyn maqaarka cad iyo mar labaad indhaha midab khafiifka ah.
Midab cawlan oo khafiifa
Midabkan Waa midda u soo baxdaa siinta tiradaas ugu sarraysa ee midab beelidda. Way ka sii dhalaal badan tahay, dhalaal badan tahay waana mid qaas ah oo geesinimo leh. Waxaa loogu talagalay ragga leh timo gaar ah iyo wajiyaal la safeeyey, oo leh maqaar khafiif ah haddii ay suurogal tahay.
Sideen ku heli karaa cirro?
Si aad u gaarto muuqaalkan cajiibka ah waa inaad Tag xarun timo-jare oo khaas ah ama timo-jare ku takhasusay rinjiyeynta iyo xoqidda Nidaamku ma sahlana gabi ahaanba dayactirkiisuna wuxuu ku lug leeyahay xoogaa kharash dheeraad ah oo jeebkaaga ah. Taabashadu waxay u baahan yihiin in la sameeyo seddexdii ilaa afartii toddobaadba mar si loo daboolo koritaanka xididka si markaa saameynta maqaarku aysan ugu muuqan mid been abuur ah.
Waa tillaabada koowaad waxayna ka kooban tahay saarista midabka dabiiciga ah ee timaha. Waa inaad ku sameysid badeecad alaab gaar ah waana hawl aad u yar ama ka yar oo adag isla markaana ku xiran hadba sida ay timahaagu u madow yihiin. Haddii aad timo dheehday, waa inaad qaadid dharbaaxo si aad uga saarto lakabkaas dheeha ah oo aad uga wada saarto dhammaan midabbada farsamada leh ka hor intaadan ku samaynin caddeyntaas.
Burburinta kadib waxaad arki kartaa in midabka timuhu uu yahay midab aad u fudud oo jaalle ah. Tallaabadan, timuhu waxay diyaar u yihiin inay aqbalaan dheeha. oo waxaad siisaa midabkaas cawlan. Xaaladaha qaarkood iyo guriga, waxaa jira kuwa doorta inay codsadaan midab cad ama midab khafiif ah si ku celcelis ah illaa ay ka noqoto cawl.
Midabka midabka khafiifka ah ee khafiifka ah ayaa lagu qasan yahay iyadoo lagu darayo 100 ml oo ah 10 mugga hydrogen peroxide. Ku dabool dhammaan timaha isku dar oo u daa in ay wax ka qabtaan illaa 30 ama 35 daqiiqo. Intaas ka dib, timaha oo dhan waa la tirtiraa oo la dhaqaa si looga saaro dheeha.
Waxaa muhiim ah in 24 ilaa 48 saac ee soo socota ka dib markaad maydho timahaaga, maaddaama dheehu wax badan ka yaraan karo. Intaa waxaa dheer, xirfadleydu waxay ku adkeysanayaan in dufanka si dabiici ah looga soo saaro madaxa ay waxyeello u geysan karto oo aysan keenaynin in timuhu ku noqdaan qoyaanka dabiiciga ah iyo dhalaalka.
Dhaqistaada joogtada ah, waa inaadan isticmaalin shaambo caadi ah maxaa yeelay waxay qalajin doontaa timaha midabkiina si dhakhso leh ayuu u libdhi doonaa. Waxaa lagugula talinayaa inaad u isticmaasho shaambo khaas ah timaha cawlan. Waxyaabahani waxay gacan ka geysan doonaan xoojinta fiber-ka timaha iyo in la daryeelo oo la dheereeyo midabka.
Shaambada taning ee timaha cirro waa ikhtiyaar kale, Halkaasoo saamaynteeda ay ku sii fideyso had iyo jeer ay ku sii hayn doonto isku mid ahaanta. Qorraxdu sidoo kale waa muhiim si looga hortago waxyeelo aan laga soo kaban karin oo timaha kaga yimaada qorraxda. Badeecad ka caawisa inaysan si xad dhaaf ah u qalalin ayaa ah isticmaal saliid timo si aad u hesho biyo. Y maaskaro gaar ah waa inaan la waayin timo cirro leh
Ugu dambeyntii waa inaad ku sii socotaa habka joogtada ah ee aad u ilaalineyso midabkaas si joogto ah Tanna waa inaad u tagtaa timo jaraha seddexdii ama afartii toddobaadba mar si aad u sameysid taabashada xididdada ku soo kordhay midabka timaha ee dabiiciga ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Timo cirro nin